यी खानेकुरा खानुहाेस् , राेगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
त्यसैगरी कोलेस्ट्रोल बढाउँछ र ब्लडप्रेसरलाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ। यसले हृदयको धमनीमा बोसो जम्ने प्रक्रियालाई कम गर्छ। यी फलमा पाइने नेचुरल केमिकल कम्पाउन्डले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई समेत सक्रिय बनाउँछ ।
शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन मसरुम अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । यसले श्वेत रक्त कोशिकालाई सक्रिय बनाएँछ । यसमा सेलेनियम नामक मिनरल, एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व भिटामिन सी, रिबोफलेविन तथा नाइसिन नामक तत्व पाइन्छ ।
मसरुममा एन्टी भायरल, एन्टी ब्याक्टेरियल तथा एन्टी ट्युमर तत्व हुन्छ। प्रतिदिन ३० ग्राम मसरुम सेवन गर्न सके इम्युन सिस्टम बलियो रहन्छ। सलाद, सुप र पास्तासित यसको राम्रो प्रयोग हुन सक्छ।
स्मरण शक्ति बढाउन यी खानेकुराहरु खानुहोस्
पोषिलो र ताजा चीज हाम्रो शरीरको लागि मात्रै होइन, दिमागका लागि पनि आवश्यक पर्दछ । मुटु, फोक्सो तथा अन्य अंगजस्तै हाम्रो मष्तिस्कलाई पनि पोषण नभई हुँदैन । त्यसो भने कुन चीज/खानाले हाम्रो दिमागलाई तेज बनाउँछ त ?
माछा वा माछाको तेल
शरीरलाई अत्यावश्यक हुने चिल्लो एसिड हाम्रो शरीरमा उत्पादन हुँदैन । ओमेगा ३ पनि भनिने यो एसिड प्राप्त गर्न पोषिलो खानेकुरा नै खानुपर्दछ । ओमेगा ३ को सबैभन्दा राम्रो श्रोत भनेको माछा हो ।
माछामा पाइने ओमेगालाई ईपिए र डिएचए भन्ने गरिन्छ । यसबाहेक सोयाविन तेल, ओखरको तेल, आलसको तेल तथा फर्सीको वियाँमा पनि ओमेगा रहेको हुन्छ । यी चीजले दिमागलाई तेज बनाउनुका साथै भुल्ने रोग पनि लाग्न दिदैनन् ।
जामुन खाने हो भने दिमाग निकै तेजिलो हुने कुरा अमेरिकाको टुप्स विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । विशेषगरी स्मरणशक्ति वा भुल्ने बानी भएका मानिसको मस्तिष्कलाई जामूनले तेज बनाउँछ । यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेल्दछ ।
कुनै पनि एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरका कोषलाई क्षति हुन वा मर्न दिदैन । गोलभेडामा पनि एउटा निकै उपयोगी एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ जसलाई ‘लिसोपिन’ भनिन्छ । यदि हामीले नियमितरुपमा गोलभेडा खाने हो भने यो तत्व रगत हुदै मस्तिष्कमा जान्छ । हामी सबैलाई थाहा नै छ, मानव मस्तिष्कमा लाखौं कोष हुन्छन् भनेर ।
यदि ती कोषमा कुनै खरावी आयो भने स्मरण शक्ति कम रोग हुने वा अल्जेमेयर लाग्दछ । तर गोलभेडा खाने मानिसमा यो संभावना कम हुन्छ । साथै लिसोपिनले दिमागलाई फूर्तिलो बनाइराख्न पनि मद्दत गर्दछ ।
भिटामिन ‘बि६’, ‘बि१२’ तथा फोलिक एसिड भएका खाद्यपदार्थ
भिटामिन ‘बि६’, ‘बि१२’ तथा फोलिक एसिडले रगतमा होमोसिस्टिन नामको तत्वलाई कम गर्ने चिकित्सकको भनाई रहेको छ । हाम्रो शरीरमा यो तत्व बढी भएमा ह्रदयघात, मस्तिष्कघात तथा अल्जेमेयेर हुने संभावना पनि बढ्दछ । तर यदि हाम्रो शरीरले प्रयाप्त मात्रामा भिटामिन ‘बि६’, ‘बि१२’, तथा फोलिक एडिस प्राप्त गर्यो भने भने यो तत्व कम हुन्छ ।
जसले गर्दा ह्रदयघात तथा मस्तिष्कघात जोखिम कम हुनाका साथै स्मरणशक्ति पनि वृद्धि हुन्छ । यसकारण यी भिटामिन ‘बि६’ र भिटामिन ‘बि१२ पाइने चीजहरु जस्तै भटमास, अण्डा,मासु तथा माछा र फोलिक एसिड पाइने चीजहरु जस्तै हरियो सागपात, सुन्तला, एभोकाडो तथा गँहु खानु आवश्यक हुन्छ ।
गेडागुडी तथा अन्न
शरीरका अन्य अंगलाई झैं मस्तिष्कलाई पनि शक्ति चाहिन्छ । उचितमात्रामा शक्ति प्राप्त भएको अवस्थामा ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने वा एकाग्र हुने क्षमता पनि धेरै हुने गर्दछ ।
यदि हामीले इनर्जी दिने खाने कुराहरु जस्तै भात, रोटी, आलु, गेडागुडी, मकै जस्ता अन्न खाने हो भने रगतमा प्रयाप्तमात्रामा ग्लुकोज हुन्छ । त्यो ग्लुकोज रगत हुदै हाम्रो मस्तिष्कमा जान्छ र ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक शक्ति मस्तिष्कले प्राप्त गर्दछ । फलस्वरुपः मानसिकरुपमा हामी निकै बलियो हुन्छौं ।
चुत्रो वा कालो ऐंसेलु
कालो ऐंसेलुमा प्रशस्तमात्रामा भिटामिन ‘सि’ पाइन्छ । भिटामिन ‘सि’ले मानसिक फूर्ति तथा क्षमता बढाउँछ । त्यसैले चुत्रो तथा कालो ऐंसेलु खानु मस्तिष्कका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ ।
फर्सिकाे बियाँ खाएर पनि कहीं दिमाग बढ्छ भनेर हाँस्नुभयो होला होइन रु तर वास्तवमा भन्ने हो भने फर्सिका बियाँलाई निकै पोषिलो चीज हो । यसको कारण के हो भन्दा विचार गर्ने वा सोच्ने शक्ति विकास हुन र स्मरणशक्ति बढाउन जिङ्क नभई हुदैन । अनि फर्सिका बियाँमा जिङ्क अत्याधिक हुन्छ । त्यसैले आफ्नो दिमागलाई तेज बनाउने हो भने फर्सिका बियाँ नफाल्नुहोस, बरु खानुहोस् ।
ब्रोकाउलीमा फोलिक एसिड र भिटामिन ‘के’ प्रशस्तमात्रामा पाइन्छ । भिटामिन ‘के’ले विचार तथा विश्लेषण गर्न सक्ने गरी हाम्रो मस्तिष्कको विकास गर्न सहयोग गर्दछ । यसले गर्दा दिमाग तेज हुने गर्दछ । त्यसकारण ब्रोकाउलीलाई पनि मानसिक स्वास्थ्य तथा विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
दहीमा क्याल्सियम, पोटासियम र म्याग्नेसियमका साथै प्रोबायोटिक्स ९ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने ब्याक्टेरिया० पनि पाइन्छ । यी प्रोबायोटिक्स हाम्रो दिमागका लागि पनि आवश्यक पर्दछन् ।
विशेषगरी दिमागलाई सक्रिय बनाइराख्न र दिमागमा भएका अनावश्यक किटाणुलाई निकाल्न यस्ता ब्याक्टेरिया आवश्यक पर्दछ । यसका साथै दही सेवनले डिप्रेशन तथा मानसिक तनाव पनि कम हुन्छ । तर दही धेरै खानु भने हुदैन ।
स्मरणशक्ति घटिरहेको छ भने यसको एउटा कारण भिटामिन ‘ई’ कम भएर हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । बुढेसकाल लागेपछि स्मरणशक्ति कम हुन्छ । तर स्मरणशक्तिलाई बढाउन भिटामिन ‘ई’ पाइने चीज प्रयाप्त मात्रामा खाने हो भने स्मरण शक्ति बढाउँन सकिन्छ ।
यसका लागि ओखर खानु उपयुक्त मानिन्छ किनभने ओखरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन पाइन्छ । कुरिलो, हरियो सागपात, अण्डामा पनि भिटामिन ‘ई’ रहेको हुन्छ ।
Don't Miss it गोसाइँकुण्ड मेला जाँदा लेक लाग्ने समस्याबाट यसरी बच्न सकिन्छ ? जान्नसहाेस्
Up Next कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्ने ? सम्पुर्ण जानकारी एकै ठाउँमा